ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7နယူးယောက်စီးတီးမှယနေ့အထိလူတိုင်းတွင်သွားတဲ့အကြောင်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 24 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူနယူးယောက်စီးတီးမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်ဤစာမျက်နှာမှတဆင့်ဖတ်ရှုဖို့မိနစ်အနည်းငယ်တို့ကိုမနှမြောသေချာအောင်. သင်တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြပြီးမြို့ထဲရှိတစ်ဦးလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေလျှင်ပင်ထိုဆွေးနွေးမှုကိုစစ်ဆေးပါနဲ့; သင့်ရဲ့အချက်အလက်အသစ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့မေတ္တာသည်ယင်းတို့အနက်တဦးမှထွက်ကြိုးစားနေအကယ်စင်စစ်သင်သည်ကောင်းသောရိုက်ချက်ဖန်တီးရန်အထောက်အကူပြုမည်. ဒါကြောင့်, ဒီနေရာမှာနယူးယောက်စီးတီးမှလူတိုင်းသွားရာခုနစ်ပါးရက်စွဲများများမှာ (ဖတ်သွားသင့်တယ်) အပေါ်.
1. အကြော်က Pan ကနေနေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်
ငယ်ရွယ်စုံတွဲ, ဟဒ်ဆန်သည်ဤအရပ်ဌာနဧကန်အမှန်လက်ရှိတွင်ခေတ​​်အစားဆုံးချိန်းတွေ့ခရီးလမ်းဆုံးမြို့အအိမ်တလုံးဖြစ်ပါသည်. ပန်, အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦး sunken lightship အရာဖြစ်၏ 1929, ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ယနေ့သင်စဉ်အတွေ့လိမ့်မည်အများဆုံး Electrify ရေငုပ် bars တွေကိုတဦးရဲ့တယ်.
ဟဒ်ဆန်မြစ်တဘက်သို့နေဝင်ချိန်၏အမြင်ဧကန်အမှန် scintillating နှင့်ဘား၏ဝန်းကျင်မှအချစ်ဇာတ်လမ်း၏တစ်ဦးထိတွေ့ထပ်ဖြည့်သည်.
အဖြစ်မကြာမီသင်သည် Prospect Heights အတွက်ဒီမြို့ပြအိုအေစစ်မဝင်ရလိမ့်မယ်အဖြစ်, သင်သည်မိုင်ဝေးတဲ့မြို့ရဲ့ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားမှလာကြပြီဆိုရင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်.
ဘရွတ်ခ်လင်းရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်သင်နှင့်နာရီပေါင်းများစွာများအတွက်စေ့စပ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်စောင့်ရှောက်ရန်လုံလောက်သောသဘာဝအလျောက်ဘဏ္ဍာကိုရှိပါတယ်; ဥပမာအားဖြင့်, ထို Native Flora ဥယျာဉ်, ထို Cranford Rose Garden, ထိုရှိတ်စပီးယား Garden နှင့်ပို. သို့သော်, သင်သည်အဘယ်သို့ရာအရပ်ကိုခန့်အများဆုံးကြိုက်လိမ့်မယ်သင်သည်မြို့ထဲကအများဆုံးအခြားဒေသများတွင်ရရန်ရုန်းကန်ခြင်းဖြေသည်.
3. ထို flush အစားအစာရှော့ပင်းမောလ်တစ်ခုခရီးစဉ်
flush အတွက်အစားအစာရှော့ပင်းမောလ်, New York City, အရသာကန်တုံနှင့်အဘိဓါန် Mandarin ဟင်းလျာများထမ်းဆောင်ဘို့အကျော်ကြား.
ဒီသူအပေါင်း bonafide Foodie များအတွက်ပြည့်စုံသောနေ့စွဲပါလိမ့်မယ်. လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သူတို့ရှိသည်တိုင်းမုန့်ညက်ပုံရိပ်တွေကိုတင်လိုက်တယ်၏အလေ့အကျင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းဒီချိန်းတွေ့စိတ်ကူးအတော်လေး enthralling တွေ့လိမ့်မည်.
ကျဆုံးစဉ်ကာလအတွင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအချို့သောကြီးမြတ်အချိန်ဖြုန်းဖို့ရှာဖွေနေ? Richmond မြို့များ၏ရွာဟောင်းမှာသမိုင်းဝင်နန်းတော်၌နေ့စွဲအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း.
Central Park နွေရာသီလအတွင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူသွားနေရာကောင်းတခုဖြစ်သည်. ဒါဟာနယူးယောက်စီးတီးရှိနွေရာသီပုံမှန်အားဖြင့် taxingly စိုစွတ်သောဖြစ်ကြသည်ကိုစစ်မှန်တဲ့င်; သို့သော်, နေဝင်ဝင်တစ်ချိန်ကရာသီဥတုသာယာသောဖြစ်လာ. ရလဒ်အနေနှင့်, နွေရာသီလများအတွင်း, သင်အလွယ်တကူပွင့်လင်းညဦးယံ၌ရက်စွဲများစီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်.
Central Park, ကရှိပါတယ်အားလုံးဖျော်ဖြေရေး options တွေကို, အကယ်စင်စစ်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်သွားကြဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်သည်.
6. အဆိုပါဖိနပ် ROOM တွင်မှာရယ်မောရှိသည်
တစ်ဦးကအင်္ဂါနေ့ညဉ့်တွင်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်ထွက်သွားရန်စီစဉ်? သင်တို့ကဖိနပ် ROOM တွင်အားဖြင့်ရပ်တန့်စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်. တိုင်းအင်္ဂါနေ့, ထို burlesque နေရာရှေ Herzog ရဲ့ဟာသပြပွဲ stages. သူနှင့်အတူ, Herzog များသောအားဖြင့်မိမိအအံ့သြဖွယ်များနှင့်ပြောပေးပါဟင်လေရီမေမေရှိတယ်.
7. Bryant Park မှာရုပ်ရှင်ရက်စွဲခံစားပျော်မွေ့
ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခြင်းအတွက်နဲ့ဂန္၏သူအပေါင်းပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေ့စွဲပါလိမ့်မယ်; ဒါပေမဲ့, အောက်မေ့သတိရ Bryant Park မှာရုပ်ရှင်ရက်စွဲအမြဲတနင်္လာနေ့တွင်စီစဉ်ထားရပါမည်.
တိုင်းတနင်္လာနေ့, နေဝင်ချိန်မှာ, လဟာပြင်ရုပ်ရှင်ဒီပုဂ္ဂလိကပိုင်စီမံခန့်ခွဲပြည်သူ့ပန်းခြံမှာပြသ. တချို့မု, စပျစ်ရည်တပုလင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးသင်၏နှစ်ဦးကိုစောင့်ရှောက်ရန်စောင်နေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ရက်စွဲရှိသည်ဖို့လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်နယူးယောက်စီးတီးရှိအများဆုံးရင်ခုန်စရာသင့်အား site များမိတ်ဖက်ယူနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ရက်စွဲအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ပါစေ, သင်ကအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းလိုပါလိမ့်မယ်နှင့်ထိုမေတ္တာင်.
5 ပထမဦးစွာ Daters အမျိုးအစား. သင်အဘယ်တစ်ခုမှာ Are?